Sarkaal Sare oo Ka Tirsan Xamaas oo War Kasoo Saaray Xabad Joojinta La Qorshaynayo – Borama News Network
Sarkaal Sare oo Ka Tirsan Xamaas oo War Kasoo Saaray Xabad Joojinta La Qorshaynayo
Sarkaal sare oo Xamaas ka tirsan ayaa sheegay inuu rajeynayo in Israa’iil iyo xooggaga Gaza ay gaaraan xabbad-joojin “maalin ama labo maalin gudahood” xilli werarrada ay weli sii socdaan.
In ka badan 100 duqeymaha cirka ah ayay saakay aroortii diyaaradaha Israa’iil ka geysteen dhismooyin ku yaalla Gaza.
Xooggaga Falastiiniyiinta ayaa ku jawaabay gantaallo ay ku rideen gudaha Israa’iil.
Dagaalka Gaza ayaa bilowday kaddib toddobaadyo ay sii xoogeysatay xiisadda Israa’iil iyo Falastiiniyiinta u dhaxaysa ee ka taagan Bariga Qudus, taas oo sababtay heer ay labada dhinac ku dagaallamaan goob ay Muslimiinta iyo Yuhuudduba u aqoonsan yihiin inay barakeysan tahay. Xamaas, oo maamusha Gaza, ayaa bilowday inay ganto gantaallo kaddib markii ay Israa’iil uga digtay inay aaggaas isaga baxaan, taas oo horseedday duqeymo dhanka cirka ah oo aargoosi ah.
Muxuu yiri sarkaalka Xamaas?
Ciidamo Itoobiyan ah oo Weerar Ku Qaaday Cisbitaal Iyo Fah faahin kasoo baxaysa
Dawladda Soomaliya oo Sheegtay in Hawlgal Lagu Dilay Xubno Ka Tirsan Al Shabaab
Dagaalka Dalka Itoobiya Oo Kala Qaybiyay Xulafadii Dalalka Carbeed
Shirkada Dp World Oo Qalab Caafimaad Ku Wareejisay Wasaarada Caafimaadka Somaliland
Maxay Tahay Su’aasha Sida Wayn U Cabsi Galisay Bariga Dhexe Iyo Reer Galbeedka